Maxaad kala socotaa sida CIA-da Mareykanka ku heleen guriga Bin Ladin lagu diley +sawiro – SBC
Maxaad kala socotaa sida CIA-da Mareykanka ku heleen guriga Bin Ladin lagu diley +sawiro
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya sida sirdoonka Mareykanka gaar ahaan CIA-du ku ogaatey guriga la sheegay in lagu diley hogaamiyihii shabakada Al-Qaacida Osama Bin Ladin oo lagu diley weerar maalinimadii Axada ka dhacay magaalada Abbatobad ee ku taal waqooyiga wadanka Pakistan.
Ilo wareed oo laga helay sirdoonka Mareykanka ayaa sheegaya in sababta ugu weyn ee horseedka ka dhigtey in la soo ogaado halka uu ku sugan yahay ay tahay iyadoo la helay xogta fariin qaadaha Osama Bin Ladin oo sida la sheegay isaguna ku dhintey weerarkaasi.
Fariin qaadaha Bin Ladin waxaa lagu magacaabi jirey Sheikh Abu Ahmed wuxuu u dhashay wadanka Kuwait wuxuu masuul ka ahaa in Osama Bin Ladin uu u soo gudbiyo fariimaha uu ka sido madaxda kale ee shabakada Al-Qaacida isagoo sidoo kale ka soo qaadi jirey fariimaha Osama uu u gudbiniyo madaxdiisa & dagaalyahanada Al-Qaacida ee ku kala sugan dunida daafaheeda.
Sheikh Abu Ahmed wuxuu ahaa nin uu aad ugu kalsoon ahaa Osama Bin Ladin wuxuu kaloo ahaa nin ay sirdoonka Mareykanku mudo raadinayey xogtiisa waxaana la xaqiijiyey in magaciisa xitaa ay mudo la’aayeen sirdoonka CIA-da balse waxaa u suurtgashay CID-da inay helaan xogtiisa iyo magaciisa oo rasmi ah sanadkii 2004-tii.
Sheikh Abu Ahmed magaca ay hayeen CIA-da wuxuu ahaa Abu Ahmed Al-Kuwaiti waxaase la ogaadey magaciisa rasmiga ah ka dib markii la qabtey Hassan Ghul oo oo ka mid ahaa saraakiisha Al-Qaacida kaasi oo laga qabtey wadanka Ciraaq sanakdii 2004-tii.
Ghul waxaa la geeyey xabsiga Guantanamo oo Mareykanku ay ku hayaan dadka xiriirka la leh waxa uu ugu yeero argagixisada, waxaana la xaqiijiyey in Ghul lagu sameeyey jirdil isla markaana 183 jirdil loo adeegsadey biyo iyo koronto lagu sameeyey isagoo laga doonayey in uu sheego xogta ku aadan Hogaamiyaha Al-Qaacida.
Jirdilkaasi lagu sameeyey Hassan Ghul wuxuu u sheegay sirdoonka Mareykanka xogta uu ka hayo xubnaha sar sar ee Al-Qaacida iyadoo waxa ugu weyn ee la raadinayey uu ahaa in lahelo Bin Ladin halka uu ku sugan yahay iyo waliba sida uu kual xiriiro xubnaha Al-qaacida.
Ghul wuxuu u sheegay sirdoonka in nin u dhashay dalka Kuwait uu yahay fariin qaadaha Bin Ladin kaasi oo fariimaha u geeya kana soo qaadaa, isagoo u sheegay sirdoonka sidoo kale in ninkaasi uu aad ugu dhaw yahay oo ku xiran yahay Faraj al-Libi oo ahaa taliyaha hawlgalinta Al-Qaacida, kaasi oo badaley Khalid Sheikh Mohammed oo Mareykanku ay qabteen markii uu dhacay weerarkii 9/11, sidaasi si la mid ah Al-Libi wuxuu isna u gacan galey Mareykanka. CIA-da oo jirdil iyo su’aalo waydiin adag ku sameysay Al-Libi wuxuu sheegay oo kaliya in uu yaqaan fariin qaadaha Bin Ladin balse wuxuu sheegay inaanu aqoon in uu yahay Kuwati iyo in kale, iyadoo warku sheegayo in CIA-du ay warkaasi been ahaan u qaadatey.
Khalid Sheikh Mohammed ayaa isagana markii lagu sameeyey jirdil iyo su’aalo waydiin wuxuu sheegay magaca ninka fariin qaadaha u ah Bin Ladin isagoo magaciisa ku sheegay Ahmed.
Shabakada Internet-ka ee Wikileakes ee soo bandhigta wararka sirdoonka & diblumaasiyada waxay maanta baahisay in dilka Osama Bin Ladin uu yimid ka dib markii warar dhanka sirdoonka ah laga helay maxaabiista ku xiran xabsiga Guantanamo Bay.
Wikileaks waxay shaacisey in Faraj al-Libi & Khaalid Sheikh Mohamed oo sirdoonka Mareykanka magaciisa u sameysteen KSM in ay bixiyeen sirta horseeday in Bin Ladin la soo helo oo la dilo ugu dambeyntii, iyagoo raggan ay sheegeen magaca ninka fariin qaadaha u ah Bin Ladin kaasi oo ahaa Ahmed.
Sirdoonka Mareykanka markii ay heleen magaca saxda ah ee ninkan waxay ku sameeyeen baadi goob iyo dabagal socdey mudo afar sano ah iyagoo aaminsanaa mar hadii la helo Ahmed in ugu dambeyntii la heli doono Osama Bin Ladin.
Dad badan oo sirdoon ah oo baadi ugu jira inay helaan xogta Sheikh Abu Ahmed Al-Kuwaiti ayaa lagu daadiyey wadamo kala duwan waxaase badankooda la dhigay wadamada Pakistaan & Afgaanistan.
Ilo wareedka sirdoonku waxay xaqiijiyen in qoyska Ahmed ay ku nool yihiin bariga dhexe, waxaana sirdoonka ay dhageysan jireen telefoono kal duwan si ay u helaan xogta ninkan. Sirdoonka la socdey xogta Ahmed waxay xili aan la sheegin goorta uu ahaa ay heleen isagoo wata baabuur Suzuki ah oo cad isagoo xiligaasi marayey magaalada Peshawar ee wadanka Pakistaan magaaladaasi oo ah magaalo dad badan ay ku nool yihiin oo si weyn looga aaminsan yahay siyaasada Al-Qaacida.
Sirdoonka CIA-da waxaa la sheegay in ay dusha kala socdeen Ahmed ilaa uu galey guri ku yaal magaalada Abbotobad halkaasi oo la sheegay in Al-Libi in uu ku noolaa xili sii horeysay, gurigaasio oo leh darbi dheer oo 18 feet gaaraya iyo silig isla markaana aan laheyn telefoon iyo Internet.
Bin Ladin iyo saraakiisa waxaa la xaqiijiyey inaanay ku wada xiriiri jirin wax telefoon ama Internet iyagoo cabsi ka qabey in la helo xogtooda ama meelaha ay joogaan maadama sirdoonka Mareykanka ay aad ula socdeen telefoonada iyo Interent-ka, waxaana taasi badalkeedi ay ku kala war qaadan jireen waraaqo iyo fariimo gacanta la isaga gudbin jirey.
Bishii February ee sanadkan waxaa la ogaadey xogta oo dhameystiran taasi oo aheyd in guriga ku yaal Abbotabad uu ku nool yahay Osama Bin ladin, isla markaana ay tahay in la qaado talaabo laakiin warku wuxuu xaqiijinayaa in Barack Obama uu diidey in talaabo la qaaado isagoo sheegay inaan la heyn cadeyn rasmi ah oo ku aadan in Bin Ladin uu ku nool yahay gurigaasi.
Ugu dambeyntii wararka dhanka sirdoonka waxay xaqiijinayaan in CIA-da Mareykanka ay si weyn ula socotey ku sugnaanshaha Osama Bin Ladin ee guriga, iyadoo la sugayey arimo fara badan oo ay ka mid tahay in la siidaayo mid ka mid ah saraakiisha sar sar ee CIA-da oo lagu magacaabo Raymond Davis kaasi oo loo haystey dilka laba qof oop Pakistaaniyiin ah bishii January ee sanadkan, waxaana ninkaasi la siidaayey 16-kii March ee sanadkan, iyadoo laga cabsi qabey in hadii inta ninkaasi la hayo la dilo Bin Ladin ay dhici karto in isagana la dilo.
Sidoo kale weerarkan waxaa soo dadajiyey ka dib markii warbixinta ku saabsan in CIA-du heshay magaca fariin qaadaha Osama Bin Ladin ay ogaatey Wikileaks laba todobaad ka hor taasi oo la sheegay in laga cabsi qabey in hadii ay daabacdo Wikileaks in Bin Ladin uu baxsado taasi oo keentey in weerarka la fuliyo.
Tani waxay muujinaysa in Mareykanku ay mudo bilooyin ah Bin Ladin ku ogaayeen halka uu ku sugan yahay oo ah guriga ku yaal magaalada Abbotabad balse lala sugayey xili ku munaasib ah taasi oo u muuqanaysa in ay tahay fursad Madaxweyne Obama ku doonayo in dib loogu soo doorto maadama uu ka helay sumcad xoogan dadka Mareykanka markii uu qiray in la diley Bin Ladin.
tan aniga waxaan ka dhihilaha waa wax been abuur ah oo aan waxba kajirn
ahmed abokor jibril says:
ALLE HA U NAXARIISTO USAMA
alaahu akbar xageey usaama ka dileen alla been badanaa balaayo iinku dhacday alla gaalka weyn beenbadaan
asc dhamaan waan idin salaamay akhyaarta sbc m,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,if osama bin laden dhintay allaha naxariis iyo dembi dhaaf siiyo wuxuu ahaa nin kabaxay caalamka uslaamka,,,,,,,,,,,,,,hadi laga been abuuranayona allaha gaalada jabiyo